HALKAAN KA AQRISO WARGEYSKA MOGTIMES DAILY EE MAANTA OO TARIIKHDA 19KA OCTOBER
Tuesday October 19, 2021 - 09:20:15 in Wararka by Mogadishu Times
Sheekh Shariif & Cali Guudlaawe oo ka wadahadlay arrimo dhowr ah.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa M/Mu qdisho waxaa uu kulan kula qaatay Madaxwe ynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Kulanka oo ka dhacay hoyga Madaxweyn ihii ho re Shariif Sheekh Axmed waxaa diirada lagu soo sa aray Arrimaha doorashooyinka da ka.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ku bogaadiyay Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen sidii wanaagsaneyd ee uu hogaamiyay doorashadii xubnaha Aqal ka sare ku matalaya Hirshabeelle, oo u dhacd ay si daahfuran.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda kulamo ay yeelanayaan siyaasiyiinta dalka, iya ga oo ka wada hadlaya arrimaha doorashooyin ka Soomaaliya.
Guddoomiyaha hay’adda culimada Soomaa liyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa we erar culus oo dhanka afka ah u qaaday Ururka Ahlu Sunna Waljaamaca ee haatan dhaq-dha qaayada ciidan ka wada degaanada maamulka Galmudug.
Sheekh Bashiir oo ka mid ah Jamaacada Al Ictisaam ayaa shaaciyey in hoggaanka Ahlu Sunna ay fikir ahaan la mid ah yihiin Al-Sha baab, ayna isaga mid yihiin in xukunka lagu ra ado hub iyo awood dagaal, sida uu hadalka u dhigay.
"Al Shabaab iyo nimanka la baxay magaca Ahlu Sunna waxa ay ka midaysanyihiin fikar si yaasi ah oo hub lagu hirgalinayo oo awood iyo dagaal loo isticmaalayo,” ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad
Sidoo kale wuxuu tilmaa may in xilligii hubka laga qa adanayey ay aheyd markii uu dalka dowlad la’aanta ah aa, isla-markaana laga soo gudbay.
Sheekh Bashiir oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Culimada looga baahan yahay kaliya inay ka shaqeeyaan wacyi-gelinta guud ee bul shada iyo inay faafiyaan Diinta Islaamka.
"Qofka Sheekha ah shaqada u feecan ee uu qabo karo waa dacwo, waa wax u sheeg, marka Shalay cid kastoo hub wadata, hubka as is leh diinta ugu adeeg waxaan leenahay waa lagu soo gubtay faa’iido malahan dhiig xa araan ah ayaad daadinaysaa, dad baad dulmi naysaa, wax aan laguu diran oo aan diinta iyo Allah kuu diran ayaad isi saaraysaa, taas oo dulmi noqonaysa, diinta magaceeda aad ku ciyaaraysaa” ayuu sii raaciyey.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo ha atan Ahlu Sunna ay dhaq-dhaqaaqyo ciidan ka wado magaalada Guriceel oo ay dhowaan dib u qabsadeen ciidamadeeda.
Si kastaba, dib u soo rogaal celinta Ahlu Su nna ayaa weji kale u yeeshay xaaladda guud ee maamulka Galmudug oo markii hore dagaal culus kula jiray kooxda Al-Shabaab.
Dhismaha Terminaalka Cusub ee Garoonka Ugaas Khaliif ee M/Baledweyne oo Shalay xariga laga jaray
Waxaa Shalay si rasmi ah xariga looga ja ray dhismaha Terminaalka cusub ee garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Baledweyne.
wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada Xuk uumadda Fedaraalka Soomaaliya Duraan Faar ax, guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo Agaasimaha hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliya Axmed Xasan Macalin ayaa Shalay xariga ka jaray dhismaha cusub ee qeybta Terminalka garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Baledweyne.
Munaasabada Shalay xariga looga ja raayay dhismaha cusub ee garoonka Ugaas Khaliif ayaa waxaa kasoo qeyb galay masuuli yiin kala duwan oo ka socday dowlada Soom aaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baledweyne.
Masuuliyiintii kala duwanaa ee ka hada shay munaasabada lagu daahfuraayay Termi naalka cusub ee garoonka Ugaas Khaliif dham aantood waxay sheegeen iney ku faraxsan yi hiin dhismaha cusub ee garoonka iyo waliba in si guud looga wada qeyb qaato qeybaha har san ee dhismaha garoonka.
Gabagabadii dhismahaan cusub ee Termin aalka quruxda badan ee Shalay xariga laga jar ay ayaa imaanaya xili hadii Xalay uu Roob ka da'o magaalada Baledweyne ay hakad galaya an howlaha duulimaadyada ee garoonka Uga as Khaliif ee magaalada Baledweyne, maada ma ay biyaha dhex fariisanayaan wadada loo gu talo galay in diyaaradaha soo caga dhigt aan.
Caro ka dhalatay markii ‘wakiilka Shiicada ee Soomaaliya’ lagu arkay Maxfal ku yaalla Muqdisho
Maxfalka Shibis ee magaalada Muqdisho oo ay ka socotay xuska dhalashada Nabig eena Muxammed (NNKH) ayaa Shalay lagu qabtay Nin sitay calanka Shiicada, sida uu soo bandhigay maamulka maxfalkaas.
Sheekh Cabdifataax oo kamid ah culimada madxafka oo arrintaas ka hadlay ayaa shee gay in Ninkaas uu sheegtay inuu yahay Wakiilka Shiicada ee Soo maaliya, islamarkaana aan loo baahneyn in dalkeena Soomaaliya lagu faafiyo fik irka Shiicada.
"Ninka aan Shalay ku qabanay waan kula nay, waxay soo qaateen Camera iyo calanka as oo ay ku qoran tahay "Yaa Xuseyn”. Waxaa u sheegaya dadka Ahlu-Sunna Waljamaaca in aan raali ka aheyn balaayada kasoo dhex dhal aneysa mowlacyada,” ayuu yiri Sheekh Cabdi fataax.
"Ninka aan calanka ka qaadnay waxa uu afkiisa ka yiri waxaa ahay Wakiilka Shiicada ee Soomaaliya, Shiico miyaa u rabnaa Soomaal iya? oo umadda gaaleysiinaya, ma waxaasa qaadan karnaa, Culimada Ahlu-Sunna Walja maaca nahay ee dadka mowlacyada ku dhex dhuumaya waxaas soo qabta yaa la idinku dhex dhuuman.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in Ninka Shalay calanka lasoo dhex tagay munaasiba da ka socotay Maxfalka uu mar hore dad u dir ey shirarka ka dhacaya Lubnaan oo u gaar ah Shiicada.
"Marka isku imaano wuu na dhex imaana ya sawir ayuu ka qaadaya email ayuu ku dir aya Lubnaan iyo Iiran oo uu leyahay ee ga me esha ay Shiicada Soomaaliya mareyso, ma anaga nala gadanayaa?.”
Sheekh Cabdifataax ayaa si weyn uga dig ay in mowlacyada Ahlu-Sunna ay ku dhex dhu untaan dadka faafinaya Shiicada, ayna tahay in la iska dhex qabto, maadama uu sheegay in ay yihiin dad gaaleysiinaya muslimiinta.
Ma aha markii u horeysay ee gudaha Soo maaliya lagu sheego dad faafinaya fikiro diimo kale ah, hase yeeshe waa markii u horeysay ee Nin sheeganaya in uu wakiil Soomaaliya ee Shiicada uu calan la dhex tago maxfal kamid ah kuwa dalka.
Kalluumaysatada Kenya: Ma jirto wax naga hor istaagi kara inaan ka kalluumaysano biy aha loo xukumay Soomaaliya
Kalluumeysatada gobolka Xeebta ee Lamu ayaa sheegaya in aysan jirin wax ka hor ista agaya in ay ka kalluumeystaan biyaha lagu mu ransanaa ee Maxkamadda ICJ u xukuntay Soo maaliya.
Lamu oo ay ku nool yihiin in ka badan 7,000 kalluumeysato ah oo noloshoodu ay si toos ah ugu tiirsan tahay kalluumeysiga, ayaa inta bad an waxay ka kalluumaytaan dhul baddeedka la gu muransanaa ee ku teedsan soohdinta Ken ya iyo Soomaaliya.
Bishii Oktoobar 12-keedii, maxkamadda u gu sarreysa ee Qaramada Midoobey ayaa u xu kuntay Soomaaliya dhulka baddeedkaas, inkas too go'aankaas ay Kenya gebi ahaanba dii dday, iyadoo ku eedeysay ICJ inay ka eexatay.
Af -hayeenka kalluumeysatada Lamu Maxam ed Somo ayaa sheegay in dadaalladoodii ahaa ka guulaysiga dacwadda lagu soo oogay Ken ya, ay noqdeen kuwo aan waxba tarin.
"Waxaan ku sii hayn doonaa kalluumeysiga meeshii aan ka kalluumeysan jirnay, maxaa yeelay ICJ waxay sameysay go’aan aan xog badan lahayn. Way iska caddahay inaysan doo nayn inay ka fiirsadaan waxa nagu dhacaya, ”ayay yiri Somo.
Madaxweynaha Kenya ayaa dhawaan ka hor yimid xukunkii xukunkii ICJ. Isagoo ku tilm aamay xukun aan caddaalad ahayn oo horsed aya in labada dal uu xiriirkoodu sii xumaado.
Maxay ka wada hadleen Qoor Qoor iyo Taliyaha Ciidanka AMISOM ee degaannada Galmudug?
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Gal mudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa Shalay Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay Taliyaha Ciidanka AMISOM ee sector 4 iyo saraakiil uu hoggaami nayay.Kulanka ayaa looga hadlay dardar gal inta howlaha Doorashoyinka Galmudug iyo Su gidda Amiga & waliba dagaalka ka dhan ah Ururka Al-Shabaab ee laga fulinayo degaann ada Galmudug.
War kasoo baxay Madaxtooyada Galm udug ayaa waxa lagu sheegay in Madaxw eyna ha Galmudug uu soo Gaba gabeey ay kulamo Amni oo maalmahan uu la lahaa Saraakiisha Ciidada AMISOM.
Kulankan ay Shalay Magaalada Dhuusa mareeb ku yeesheen Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Taliyaha Ciidanka AMISOM ee sector 4 ayaa kusoo aadaya xilli guluf dagaal uu kajiro degmada Guriceel ee Gobolka Galg aduud.
Lafta-gareen oo ka qeyb galay dhaarinta Gudiga Adeega Garsoorka
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Ko onfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Max amed Laftagareen ayaa ka qeyb-galay Munaa sabad lagu dhaarinayey Gudiga Adeega Gars oorka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee dhowaan Madaxweynaha uu Magaacabay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koon fur Galbeed ayaa gudiga Adee ga Garsoorka kula dardaarmay inay si cadaalad ah ugutaan wa ajibkooda shaqo ayna u cada alad falaan bulshada.
"dowladnimadu bilowgeeda iyo aas-aaskeeda waa garsoor iyo cadaalad ha dii cadaalada iyo garsoorka uu galo walaac, baqdin iyo shaki oo uu istaagi waayo dowladn imadu maistaagto, waxaan ubaahanahay dad ka reer koonfur galbeed meel waliba ay jooga an inay cadaalad helaan, xukunkaan iyo dowla da koonfur galbeedna ay ka helaan dadka hor muudka unoqonaayo oo larabo inay ka shaqe eyaan waa idinka waxaan idinkula dardaarma yaa inaad howshaas si cadaalad ah aad ugu adeegtaan bulshada”ayuu yiri Lafta gareen.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koo nfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxa med Laftagareen ayaa Gudi Rabi uga bariyey in xilka loo igmaday la garab galo lana fudude eyo howsha adag.
Xiisaddii Somaliland iyo QM oo dib u qarax day iyo Muuse Biixi oo weerar culus qaaday
Waxaa markale dib u billaabmay xiisadii xo oganeyd ee u dhaxeysay xukuumadda So maliland iyo hay’addaha Qara mada Midoobay, ka dib eedeyn culus oo labada dhinac is dhaaf sadeen
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa hay’a dda arrimaha bini-aadantinima da u qaabilsan QM ee OCHA ku sifeeyay "laba wajiilenimo”, markii ay dhawaan ka hadashay musaafurinta ay billowday xukuumada Biixi ee dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya.
"Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa qay bta la yidhaahdo OCHA waxaan filayaa wixii ay ku hadleen in aanu dan u ahayn dadka Laasca anood laga raray, waxay yimaadeen iyagoo qaxoonti ah oo caydh ah maalin qudha booyad biyo ah may siin, maalin qudha bac may siin, maalin qudha kiniin kaneecada ay iskaga ilaali yaan may siin,” ayuu yiri Madaxweyne Biixi.
Sidoo kale waxa uu madaxweynaha Somalil and ku eedeeyay hay’adda OCHA inay dhaqaa le ku raadsanayaan dadka laga musaafuriyey magaalada Laascaanood, taasi oo uu sheegay inay ceeb ku tahay QM
"Soddonkaas sano maxay ku darsadeen? maxay u qabteen hadday OCHA ka naxayso dad qaxooti ah? maxay meel ugu sameyn waa yeen? maxay u gar-gaari waayeen? OCHA ma xay Shalay u qaylisay? waa laba wajiileni mada jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa, da dkayaga aanu Laascaanood ka rarayno in lac ag lagu doono waa ku ceeb Qaramada Midoo bey”
Hay’adda Qaramada Midoobay ee OCHA ayaa warbixin ay dhawaan soo saartay ku sha acisay in tirada dadka Somaliland kasoo mus aafurisay magaalada Laascaanood iyo deega anada u dhaw-dhaw ay gaareyso 7,250 qof, ku waas oo badankood ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
OCHA ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in 24 qoys oo kale la dejiyay tuulooyin hoostaga ma gaalada Buuhoodle, halka ilaa 400 qoys ama dad gaaraya 2,400 lagu wargeliyey inay ka ba xaan magaalada Ceerigaabo marka la gaaro 21-ka bishan October.
Musaafurinta khasabka ah ee dadkaas ayaa walaac ku abuurtay dadka ku nool deegaana da Somaliland ee kasoo jeeda koonfurta Soom aaliya, sida uu sheegay xafiiska OCHA ee So omaaliya.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dadka lasoo barakaciyey ay sheegeen inay ka la lumeen dad ehelkooda ah iyo carruur, hanti na ay kasoo tageen, taasi oo ay si weyn uga bi yo diiday Somaliland.
Akhriso:- Magacyada Shan Ruux oo ku dhimatay qarax ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka la gu Aaso ayaa waxaa uu ka dhacay agagaarka degaanka Daniga Baalow oo ku yaalla inta u dhaxeeysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeel laha Hoose, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho ah.
Qaraxa ayaa waxaa uu qabsaday mooto no oca Khudaarta lagu qa ado ee Saddexda lug leh, taas oo ka baxday deg mada Balcad kuna sii jee day Tuulada Garasw eyne, waxaana ku dhintay Shan Ruux oo Shac ab ahaa, kuwaas oo Magacyadooda lagu kala sheegay.
1: Hodan Xasan
2: Cabdi xukun
3: Taliye Nuur
4: Maxamad rooble
5: Sahra gacamey.
Meydadka dadka ku dhintay qaraxaas ay aa waxaa Goobta tegay oo ka qaaday Ehellad ooda, iyaga oo geeyay degmada Balcad si lo ogu Aaso.
Qaraxa Miino ee khasaaraha geystay kana dhacay Tuulada Daniga Baalow oo u dhow degmada Balcad ayaa kusoo aadaya xilli Shalay halkaasi ay howlgallo ka sameeyeen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo AMISOM.
Al-Shabaab oo sheegtay inay ka dishay Kenya ugu yaraan 8-Askari .
War kasoo baxay Al-Shabaab waxa ay ku sheegtay in Askar ka tirsan Militariga Kenya ay ku dhinteen Qarax miino oo ay jidka u geliyeen Kolonyo Gaadiid ciidan ah oo mararayay Deegaanka Kaambooni.Al-Shabaab ayaa sheegtay in ugu yaraan 8-Askari oo Kenyaan ah ay ku dhinteen Qaraxaas halka ay dhaawacmeen tiro kale oo isaga kala gudbayay Soomaaliya & Kenya gaar ahaan inta u dhaxeysa Deegaannada Kayunga ee Gobolka Lamu & Sangur.
Militariga Kenya wax faah-faahin ah kama bixin sheegashada Al-Shabaab ee ah in qarax miino ay jidka u gelisay ay ku gaarsiisay Khasaare dhimasho & dhaawac iyo wararka kale ee ku gedaaman dhacdadaan.
Kenya waxay xoogga saartay sugidda ammaanka deegaannada soo xiga Soomaaliya oo dhowr jeer Qaraxyo iyo weeraro kala kulantay Al-Shabaab, waxay si feejignaan ka muuqato isaga kala gudbaan soohdinta inkasta oo ay weeraro la kulmaan.
Socodka ugu badan ee ciidamada Kenya waa marka ay sahayda gudbisanayaan & waqtiga bedelka lagu sameeyo ciidanka ka joga Soomaaliya, Dadka degen deegaannada dhaca Xadka waxa ay sheegeen in xiliyadaas ay yihiin waqtiyga ugu badan ee qaraxyada & weerarada dhacaan
Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka oo geeriyooday
Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Marey kanka Colin Powell ayaa u geeriy ooday fay raska koroona, sida ay qoyskiisu shaaciyeen.
Colin Powell oo 84 jir ah ayaa ah aa sarkaal sare oo hore uga tirs anaa milatariga ka hor inta uusan noqonin xoghayihii arrimaha dibed da ee ugu horreeyay Afrikaan-Mareykan 2001 xilligii Geo rge W Bush.
"Waxaan weynay nin cajiib ah, aabbe, awoo we iyo muwaadin Mareykan ah,” ayaa lagu yii bayaanka ka soo baxay qoyskiisa.
"Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno shaq aalaha caafimaadka … sida ay u daryeeleen,” ayay raacisay.Mr Powell wuxuu noqday la –tal iye dhanka milateriga ah, wuxuuna lahaa wa ayo -aragnimo gacan ka geysatay qeexidda xeeladihiisa milatari iyo mid siyaasadeedba.
Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somalil and oo Hambalyo u Diray Maalinta Shuhad da SNM
Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Sha cabka Somaliland Axmed Cabdala ayaa dham baal hambalyo ah u diray Munaasibada Maal inta Geesiyaasha Qaranka Somaliland oo ah Xuska 37-Guurada Maalinta Shuhadada ee
Gudoomiyaha Xisbiga ayaa sheegay inay maalintani ka mid tahay in si weyn loo xuso oo waliba maalmaha fasaxa lagu daro isla markaana ku maalin qiimo weyn ku leh Shacabka Somaliland oo lagu tilmaamayo siday dhiigoodda iyo naftoodaba xoraynta dal ka ugu hureen halgameyaashii SNM dagaal adii dalka lagaga xoraynayay xukunkii dhiig miiratadda ahaa ee Siyaad Barre.
Waxaan ilahay uga baryayaa in uu ka war aabiyo naxariistii janno inta dhimatay, inta noo lna, umadda Somaliland waxa waajib ku ah in ay xurmo, xasuus iyo sharafba u hayaan dha mmaan geesiyaashii naftooda u soo huray da lkeena”.
Ugu danbayn Guddoomiyaha Xisbiga Dimu qraadiga Shacabka Somaliland Mudane: Axm ed Cabdala ayaa tilmaamay in xurmo iyo xas uus aan duugoobayn ay bulshadda Somaliland u hayso halgameyaashii ku geeriyooday daga alkii dalka lagu xoreeyay.
"Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda Jamhuuriyadda Somaliland, gaar ah aan geesiyaashii naftooda, maalkooda iyo mas kaxdooda u soo huray dalka, ee uu ugu damb eeyey halgankii hubaysnaa ee SNM, maalinta Xuska Shuhadada ee 17 October darteed. Waxaanu u haynaa geesiyaashaa dhammaan tood xurmo iyo xusuus aan duugoobayn”.
Madaxweyne Deni Oo Dib Ugu Laabtay Mag aalada Garowe
Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Shalay dib ugu laabtay caasimadda dowlad goboleedka Garoowe.
Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee Garoowe kusoo dhoweeyay Madaxweyne Ku-xigeenka /Puntland Md.Ax med Cilmi Cismaan Karaash, Guddoomiye Ku-xigeenka 1a ad ee G/Wakiillada D/Puntla nd,
Abuukaate Cabdicasiis C/hi Cismaan, Gole yaasha Dowladda, Maamul ka Gobolka iyo kan Degmada Garoowe, Sara akiisha Ciidamada Qalabka sida iyo qeybaha kala duwan ee Bul shada Garoowe.
Madaxweyne Deni oo muddo lix iyo toban ci sho ah ku maqnaa dalka Imaaraadka Carab ta.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bul shada Drs Fawsiya Abiikar Nuur ayaa Shalay xarunta dhaxe ee Wasaaradda Caafimadka ku soo dhawaysay Wafdi uu hugaaminayay Agaasima ha guud ee Hay’adda Ca afimaadka guud ee dalka Sweden Dr Johane Carl son iyo ku xigeen kiisa oo ay wehliyaan Safiirka Sweden, Madax ka so co tay Hay’addaha Caalamiga ah oo uu weh liyo Prof Khaliif Bile. Soo dhawaynta waxaa qayb ka ahaa Agaasimayaasha Wasaaradda Caafi maadka iyo Agaasimaha Machadka Qaran Ca agimaadla ee Soomaaliya (NIH) Waf diga ayaa isla Shalay booqday isbitaal Guud ee Demar tino, halkaas oo ay kula kulmeen Agaasimaha guud ee isbitaalka iyo madaxda kale, si ay u qii meeyaan xaaladaha Caafimaad ee ka socdo is bitaalka iyo sidii loo horumarin lahaa, korna loo gu qaadi lahaay adeega Caafimaadka ee isbi taalku siiyo Bulshada.
Hay’adda Swedish Public Health Agency ayaa waxay matano la tahay Machadka Qaran ka ee Caafimaadka Soomaliya (NIH) oo xarun tooda dhexe la filaayo in mardhaw laga dhiso Isbitaalka guud ee Demartino.
Ugu dambayntii Wasiirka Caafimaadka So omaaliya Drs Fawsiya Abiikar Nuur ayaa uga mahad celisay booqashada wafdiga, kuwaas oo muddo 3 cisho ah u joogi doona hawlo sha qo dalka gudihiis.
Axmed Madoobe oo shaaciyey saameynta uu ku reebay khilaafka Farmaajo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Ma doobe) oo Shalay daahfuray ‘kulan wada reedka dardar galinta hiigsiga xukuumadiisa’ oo lagu dardar galinayo shaqooyinka wasaar adaha maamulkaas ayaa jeediyey khudbad dhinacyo badan taabaneysay.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in daadejin ta adeegyada iyo hey’adaha dowliga ah ee Jub baland uu dib u dhac weyn ku keenay khilaaf ka maamulkaas kala dhaxeeya dowladda dhe xe ee Farmaajo hoggaamiyo.
"Waxaan u baahanahay inaan helno dowlad ka shaqeysa la noolaashaha wad amada deriska nala ah iyo aduun ka intiisa kaleba, oo aan ilaalino sumcadda dowladnima deena,” ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Sidoo kale waxa uu sheegay in hadda uu diy aar u yahay, una diyaarsan yihiin qorshayaal la gu daadejinayo adeegyada dowliga ah ee dee gaanada Jubbaland.
"Waxaan diyaar u nahay inaan daadejino dowladnimada Jubaland, waxaan culeyska sa areynaa Jubbaland oo sideedii hore ku soo no qota, ganacsiga aan furfurno, maalgashi aan keeno, oo aan dhisno Jubbaland caawi karta Soomaalida kale ee walaalaheeda ah,” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Wasaaradaha kala duwan ee xukuumadi isa ayuu madaxweyne Axmed Madoobe ka dal baday inay la yimaadaan qorshe ay ku xaqiiji nayaan la imaashaha adeegyada ay dadku ka sugayaan.
Arday Muddaharaad sameeyay oo maalintii 3aad ku xiran Xabsiyada Hargeysa
Waxaa maalintii saddexaad ku xiran qaar ka mid xabsiyada magaala da Hargeysa arday mudda haraad ka samaysayaa fa afka xarunta Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Somaliland.
Ardaydan ayaa ka cabanaysay shaqo jooj in wasaaraddaasi ku samaysay maamulaho odii dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Faarax oomaar.Dugsiga Fa arax Oomaar ayaa ka mid ah dugsiyadda dawladda ee hoos taga war adda waxbarashada Somaliland ee ku yaalla Magaalada Hargeysa. Dad kala duwan oo ay ka mid yihiin xisbiy ada mucaaradka, waalidii ntii ardaydaas iyo dad kaleba ayaa ka dalb an ayay dawladda in ar daydaas xorriyadoodii loo soo celiyo.
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdirax maan Cirro oo qoraal soo saaray ayaa waxaa uu dhaliilay tallaabadasi ay qaaden Ciidanka Somaliland, waxaana uu tilmaamay in arrin taasi ay tahay mid sharciga baalmarsan, sidoo kalena muujinaysa siyaasad xumada waxbaa rshada ee mas’uuliyiinta talada haya.
"Dhacdadii ka dhacday Dugsiga Sare ee Faarax Oomaar, Sabtidii 16ka October 2021 oo Xarunta guud ee Wasaaradda Waxbara shada iyo Madaxtooyadaba u jirta wax ka yar kun tallaabo, waxa ay muujinaysaa siyaasad xummada lagu hagayo Waxbarashada dalka. Waa tusaale cad, oo horyaalla bulshada, oo bi dhaaminaya karti darrada iyo maarayn xumma da falcelimaha ka yimaadda go’aan cabasho ka timi arday oo ku sinnaa maamule dugsi oo la beddelay, xalka qudha ee lagu furdaamiye yna uu ahaa xadhig, xabad, jujuub iyo addee gsi ciidan. In arday ka badan boqol la xidho waa ayaan darro weyn oo muujinaysa lexo-jeclo la’aanta jiilashii mustaqbalka. Waxa aan leeyahay Inta xidhan xorriyadooda dhakhso ha loogu soo celiyo” ayuu yiri Cabbdiraxmaan Cirro.
Ma aha markii u horraysay ee arday muddaha raad ka sameeyaan magaalada Hargeysa, dhawaan uun bay ahayd markii qaar ka mid ah ar dayda dugsiga Nuuradiin ay sidaas oo kale sameeyeen iyaga ka cabanaya maamulka dug sigaas
Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu qabtay KISMAAYO
Ciidamada ammaana ee maamulka Jubba land ayaa saacadihii lasoo dhaafay howl-gallo qorsheysan ka sameeyey xaafadaha magaa lada Kismaayo ee gobolka Ju bbada Hoose, kuwaas oo lagu xaqiijinayey amniga magaalad aasi.
Howl-galladan ayaa waxaa lagu soo qab-qabtay xubno ka tirsan Al-Shab aab, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ta liska nabad sugida ee maamulka Jubbaland.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay nabad su gidda Jubbaland ayaa lagu shaaciyey in ciid amada ammaanka ay weli ku raad joogaan xubno kale oo la tuhusan yahay.
Hay’adda nabad sugidda Jubbaland ayaa sidoo kale baaq u dirtay shacabka Kismaayo, waxaana ay ka codsatay inay gacan siiyaan cii damada ammaanka ee maamulkaasi.
”Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ah bulshada reer Kismaayo waxaan ugu baaqe ynaa inay indho u noqdaan ciidamada amma anka ayna ku garab istaagaan howlgallada la gu ciribtirayo haraadiga ku dhex dhuumaaley sanaya magaalada,” ayaa lagu yiri warka ay soo saartay hay’adda NISA ee dowlad gobole edka Soomaaliyeed ee Jubaland.
U gu dambeyn hay’adda qoraalkeeda kusoo gaba-gabeysay inay sii wadi doonto howl-ga llada socda ee lagu xaqiijinayo amniga ee ka socda halkaasi. Kismaayo oo ka mid ah maga alooyinka loo qorsheeyey inay ka dhacaan doo rashooyinka G/Shacabka ayaa maalmihii u da mbeeyey waxaa ka dhacayey falal liddi ku ah amniga, sida weeraro qaraxyo &dilal Qorsh eysan oo ay sheegatay Al-Shabaab.
FARMAAJO OO TAARIIKH CUSUB U DHIGAY MADAX DII SOO MARTAY XUKUNKA SOOMAALIYA
Farmaajo oo taariikh cusub u dhigay mada xdii soo martay xukunka Soomaaliya Mada xweyne Maxamed Cabdullaahi Famaajo ayaa maalmo dheeri ah doorasho la’aan sii jooga xukunka dalka, mana muuqato saansaan muuji neysa in dhawaan la qaban doono doorasho taasi oo dheereeneysa ma almahaan ugu darsoomay muddo xileedkii loo dhaariy ey ee sharciga ahaa.
Shacabka waxay tirinayaan maalmaha Farmaa jo u raacay afartiisa sano, wuxuuna noqday ma daxweynihii ugu waqtiga dheeraa kadib dowlad dii kacaanka ee uu hoggaa minayey Allaha u naxariis tee Maxamed Siyaad Barre.
Tan iyo sanadkii 2000 Soom aaliya waxay yeelatay Shan madaxweyne, mana jiro ma dax eyne doorasho ku qabt ay muddo xileedkiisa ama mid ku jaangooya maalintii la doortay ma alinteeda kale, madaxweyne kastana waxaa u raacay muddo dheeri ah.
Hase yeeshee, Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo wuxuu hadda heystaa rikoorka madaxeynihii waqtiga ugu badnaa ee xilka hayey ama ugu xukunka dheeraa wixii ka dam beeyey burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre.
Shax xisaabeedka iyo maalmihii ay xilka hayeen Shantii madaxweyne ee Siyaad Barre ka dambeeyey
1- Cabdiqaasim Salaad Xasan
Waxaa lagu soo doortay magaalada Jabuuti 27-kii Agoosto sanadkii 2000, wuxuuna xilka ka dagay 14-kii October 2004. Waxay ka dhigan tahay inuu madaxweyne ka ahaa dalka 4 Sano, 1 Bil iyo 17 Cisho
2- Cabdullaahi Yuusuf Axmed
Waxaa xilka madaxweynimo ee Soomaaliya loo doortay 14-kii Bishii October sanadkii 2004, wuxuuna shaqada ka tagay 29-kii December 2008, taasoo ka dhigan inuu xilka hayey 4 Sa no, 2 bilood iyo 15 maalmood.
3- Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Sheekh Shariif waxaa la doortay 31-dii Jan uary 2009, wuxuuna xilka ka tagay 10-kii Sept ember sanadkii 2012, taasoo ka dhigan inuu xil ka madaxeynimo hayey 3 Sano, 7 Bilood iyo 10 cisho .
Dowladdii uu madaxweyne ka ahaa dalka ma heysan muddo xileed afar sano ah sida dowladaha kale.4– Xasan Sheekh Maxamuud
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxwey na ha Soomaaliya loo doortay 10-kii September sanadkii 2012, waxaana tartanka doorashada looga adkaaday 8 February 2017, wuxuuna xilka hayey 4 Sano iyo 5 bilood.
5 – Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Waxaa xilka madaxeynimo ee Soomaaliya loo doortay 8-dii February sanadkii 2017, welina ma uusan wareejin xilka, wuxuuna xafiiska joogaa 4 sano, 8 bilood iyo 10 Cisho.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidaas ku noqday madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Soomaaliya tan iyo markii dib loo bilaabay dowlad-dhiska dalka sanadkii 2000.
WAXAA QORAY CABDULLAAHI CUSMAAN FAARAX
Madaxwayne Mustafe cagjar oo xubno ho rey uga mid ahaa Ururka ONLF ku soo daray xukuumaddiisa cusub
Madaxwayne Mustafe cagjar ayaa Shalay soo dhisay wasiirada cusub ee kamid noqon aya xukuumadda Shalay la dhisay ee Dowlad Degaanka Soomaalida.
Haddaba wasiirada cusub ee Shalay la magacaabay ayaa waxaa ku jira xubno horey uga mid ahaa Ururka ONLF, kuwaas oo xilal kala duwan kasoo maray ururka.
Xubnahaas ayaa waxaa kamid ah Axmed Yaasiin oo aad looga dhex yaqaano ONLF, xilal kala duwana ka soo maray ONLF, Mustafe cagjar ayaa Shalay u magacaabay Wasiirka Khataraha Masiibooyinka.
Axmed Yaasiin ayaa intii dambe kamid ahaa garabkii ka goostay ONLF, isla markaana isu aqoonsaday inay iyagu yihiin ONLFta sax da ah. Madaxwayne Mustafe cagjar ayaa hor ey u ballan qaaday inuu xukuumaddiisa cusub ku soo darayo xubno kamid ah mucaaradka, balse xubnahan wax ka baxsan oo mucaarad ah oo xukuumadda cusub ka dhex muuqda ma jirto.Hoose ka aqriso magacyada wasiirada cu sub ee Shalay la magacaabay, waxayna u qor naayeen sidan:-
1- Xafiiska Madaxweynaha: Dr. Xuseen Qa asim
2- Xafiiska Beeraha: Dr. Cabdiqaadir Iiman
3- Xafiiska Hor. Xoolo dhaqatada: Subeer Xuseen Cumar.
4- Xafiiska Hor magaalooyinka: Cabdiraxman Ciid Daahir.
5- Xafiiska Waxbarashada: Cabdulaahi Laag.
6- Xafiiska Caafimaadka: Dr. Muuse Axmed Ibraahim
7- Xafiiska Maaliyadda: Cabdiraxmaan Axmed.
8- Xafiiska Adeega shacabka: Warsan
9- Xafiiska Jidadka: Eng. Saddaam Xuseen
10- Xafiiska Nabadgalyada: Mubashir Dubad
11- Xafiiska Cadaalada: Axmed Xaaji Samatar.
12- Xafiiska Biyaha: Xasan Daadhi
13- Xafiiska Xirfadaha iyo shaqo-abuurka: Xu seen Geydh
14- Xafiiska Arimaha Bulshada: Cabdullaahi Amaan.
15- Xafiiska Arrimaha Haweenka: Xaliimo Xas an Maxamuyd
16- Xafiiska Ganacsiga Iyo Gaadiidka: Malaw Maxamed
17- Xafiiska Maalgalinta iyo Warshadaha: Da yib Axmed Nuur
18- Xafiiska Ciyaaraha iyo dhalinyarada: Max amed Mahdi.
19- Xafiiska Warfaafinta: Cabdiqaadir Rashid Ducaale.
20- Xafiiska Macdanta Iyo shidaalka: Khadra Bashiir.
21- Xafiiska Deegaanka iyo Kaymaha: Eng Muxiyadiin Cabdi Xuseen22- Xafiiska Waraabka iyo dooxooyinka: Max amed Fatah
23- Xafiiska Curinta iyo sayniska: Faaduma Deeqa.
24- Xafiiska Qorshaynta: Maxamed Sheekh Aden.25- Xafiiska Dakhliga: Maxamed Naaji 26- Xaf iiska Maaraynta Iyo khataraha: Axmed Yaasiin Sh Ibraahim.
27- Xafiiska Dhaqanka Iyo Dalxiiska: Maxamed ismaaciil.
Wasiiradan cusub ee Shalay uu magacaa bay Madaxwayne Mustafe cagjar ayaa isugu jira kuwo xafiisyada loo kala badalay iyo kuwo ku cusub saaxadda siyaasadeed.
Raila Odinga oo ballanqaaday inuu dib u soo celindoono ganacsigii Qaadka Miirooga ee Soomaaliya loo iib gayn jiray
Hoggaamiyaha xisbiga Orange Democratic Movement (ODM) Raila Odinga ayaa u ballan qaaday beeraleyda qaadka ee Meru in uu suu qyo uga heli doono wax soo saarkooda dalal kala duwan haddii loo doorto madaxweynaha Kenya sannadka 2022 -ka.
Odinga ayaa hadalkaan ka sheegay maga alada Mau, ee Gobolka Meru, iyadoo ahayd maalintii ugu horreysay ee socdaalkiisa sadde xda maalmood ah ee uu ku soo jiidanayo cod bixiyeyaasha gobollada Bari dalka Kenya.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa she egay in dalalka uu ka rajaynayo in suuqyada qaadka loo iibgeeyo ay ka mid yihiin Jamhuur iyadda Dimuqraa diga ee Congo (DRC) iyo Soom aaliya.
Hoggaamiyaha ODM ayaa wacad ku maray in uu xallin doono arrimaha xa dka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, si loo hubiyo in qaadka si nabadgelyo ah loogu gud biyo dalka Soomaaliya.
"Waan ogahay in beeraleyda ay dhibaatoo yin badan ku qabeen suuq la’aan suuqeenna Soomaaliya ayaa hoos u dhacay" ayuu yiri Ra ila Odinga, musharaxa xisbiga mucaraadka ODM.
Raila Odinga waxa uu sheegay in ay Som aliland, horey ugu heshiiyeen in Qaadka Mii rooga loo dhoofiyo, laakiin ay dowladda Soo maaliya ka hor -joogsatay in Kenya halkaas u dirto Miirooga.
Guddoomiyihii Gobolka Shabeellaha hoose oo xilkii laga qaaday
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Max amed Laftagareen ay aa Shalayeyd xilkii ka qaaday Guddoomiyihii Gobolka Shabeell aha hoose Abdulqadir Maxamed Nuur Siidii.
Wareegto kasoo baxday xafiis ka ma daxweynaha ayaa xilka loo ga qaaday Siidii, sidoo kalena waxaa lagu mag acaabay Guddoo mihaha Cusub ee Gobol kaasi, waxaana loo maagcaabay Mohamed Abdi rahim Nur.
Cali Xarbi Cali iyo xog ku saabsan cidda xagjir ka dhigtay oo la shaaciyey
Warbaahinta UK ayaa markii ugu horreysay baahisay sawirka Cali Xarbi Cali, oo ah wiilka Soomaaliga ah ee loo xiray dilka xildhibaan David Amess oo Jimcihii lagu dilay mind, ma agaalda Essex oo qiyaatsii 65 km u jirta magaalaa London.
Sidoo kale, xog cusub oo la helay ayaa sheegeysa in Cali lagu qasbay inuu qaato kooras waxbarasho oo loo gu talo-galay in lagu bedd elo dadka xagjirka noqda, muddo shan sano ka hor ah, kadib markii macallinkiisa uu ku ar kay fikrado xagjir iyo inuu taageero weyn u ya hay Anjem Choudary oo ah wadaad baahiya naceybka dadka aan Muslimiinta aheyn.
Cali oo 25 jir ah ayaa lagu warramay in dil ka xildhibaan David Amess uu isaga doorto si wareegto ah un, oo aysan jirin naceyb gaar ah oo uu u qabay.
Dad saaxiibo la ah Cali ayaa u sheegay wargeyska Daily Mail inuu xagjir noqday kadib markii uu daawaday muuqallo badan oo ah khudbadaha Anjem Choudary oo ku jira Yo uTube. Anjem Choudary ayaa horey waxaa loogu helay dambi ah inuu naceyb faafiyo.
Cali ayaa markii lagu arkay fikradaha xagjirka isaga oo 19 sano jir waxaa loo diray barnaamij ka Prevent ee loogu talo-galay dadka xagjirka noqda, maadaama loo arkay in xagjirnimadiisa aysan gaarin heer loo gudbiyo sirdoonka MI5.
Waxaa sidoo kale lagu warramay in xilliga lagu arkay fikradaha xagjir ay kusoo aaday xilli aa nu wanaagsaneyn xiriirka isaga iyo qoyskiisa, ayada oo hooyadiis iyo aabihiis ay kala tageen kadibna aabihiis uu aaday Soomaaliya.
Qof ku dhow qoyskiisa ayaa sheegay in ri yadiisa aheyd inuu noqdo dhaqtar, islamark aana uu isku diyaarinayey inuu qaato imtixaan ka NHS.
Xarbi Cali Kulane oomarkii ugu horreysay ka hadlay xariga wiilkiisa Cali Xarbi Cali, ayaa isna yiri "Daqiiqaddan la joogo waxaan marey naa xaalad aan caadi aheyn oo argagax leh.”
"Ma ahan waxaan filayey ama xitaa ku riyood ay,” ayuu Kulane ku yiri wareysi kale oo uu sii yey The Sunday Times.
"Sababo la xiriira baaritaanka horudhaca ah ee socda, waxaa igu waajib ah oo la igu amray inaan ka hadlin arrintan,” ayuu yiri Xarbi Cali Kulane.
Yahuudda oo walaac ka muujisay Gantaal aha Xisbullaah
Israel ma dooneyso inay dagaal la gasho Xizbullah, hase yeeshee waxay diyaar u tahay inay maalinkii wajahdo 2,000 oo gantaal oo ka ga yimaada kooxda reer Lubnaan haddii dag aal uu qarxo, waxaa sidaas AFP u sheegay sar kaal militari oo Israeli ah.
Bishii May ee sanadkan, ciidamada Israel ayaa dagaal socday 11 maalmood la galay koo xda Xamas ee Marinka Gaza, kuwaas oo Isr ael kusoo tuuray 4,400 oo gantaal.
Israel waxay sheegtaa in habkeeda difaaca gantaallada ee Iron Dome uu dhexda ka qab tay 90% gantaalladaas ayada oo kaliya 300 ay ku dhaceen degmooyin la degan yahay.Bishii May, magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdod wax ay wajaheen "tiradii ugu badneyd oo gantaallo lagu soo tuuray ah taariikhda Israel,” waxaa si daas yiri Uri Gordin, oo ah madaxda Taliska Difaaca Gudaha ee ciidamada Israel.
Puntland oo Midowga Yurub kala hadashay ka hortagga Kalluumaysiga sharci darrada.
Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo gadiid ka badda Mamaulka Puntland Senetor Moha med Cabdi Majiino iyo Wasiir kuxigeenka Was aaradda Qorshaynta Hor-umarinta dhaqaalaha iyo Xiriirka Caalamiga ahna Duqa Degmada Bossaso Abdiqani Ahmed Ismail (Deera-dile) ayaa kulan la qaatay Taliyaha Ciidanka Ilaal ada badda Puntland ee Midowga Yurub, Admi ral Alejandro Cuerda.
Kulanka oo ka dhacay dusha sare mid ka mida maraakiibta howlgalada Midowga yurub Ayaa looga hadlay xoojinta
iskaashiga Amniga xeebaha Puntland Xak amaynta Tahriibka joojinta Kallumaysiga sharci darada ah ilaalinta Hubka kasoo dega eeriyada xeebaha Boosaaso iyo arimo kale oo muhiim ah.
Duqa degmada Bossaso ayaa ku booriyey ciidamadda ilaaliyaha xeebaha puntland ee midowga yurub shaqada ay ahaan wuxuna she egay in la xoojiyo lagana wada shaqeeyo ilaa linta iyo la dagaalanka wax walba oo sharci daro ah una keeni kara Amni xumo Xeebaha Puntland.
Meelo kamid ah Xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar si sharci darro ah uga kalluumeysta Maraakiib iyo Doonyo Shishe eye, sidoo kale waxaa ku sugan Maraakiib Shi sheeye, kuwaas oo sheega inay la dagaalam ayaan Kooxaha Burcad Baddeeda Soom aalida.
Ciidamada Kenya oo dad shacab ah iyo xoo lo badan ku laayey Jubbada Hoose Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa shee gaya in saacadihii lasoo dhaa fay ciidamada Kenya ay toog asho u geysteen dad shacab ah oo ku sugnaa qeybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Somalia.
Dhacdadan ayaa ka dhacday Raaskaambo oni, waxaana dadka ay waxyeelada ay soo gaartay ay ahaayeen xoolaley ku dhaqnaa ha lkaasi.
Toogashadan ayaa waxaa ku dhintay nin lagu magacaabi jirauy Carab Qoriyow oo ka mid ahaa dadka deagaanka, halka ay ku dhaa wacmeen labo qof oo kale oo rayid ah.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Kenya ay laayeen xoolo fara ba dan oo gaaraya ku dhowaan illaa 50 neef oo Lo’a ah oo ay lahaayeen dadka deegaanka.
Illaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa waxa keenay in ciidamada Ke nya ay dhibaatadaas u geystaan dadkaasi sha cabka ah ee aan waxba Shalaysanin.
Dadka deegaanka ayaa sidoo kale haatan cabsi ka muujinayo inay sii wadaan ciidamada Kenya Kenya dhibaatada ka wadaan halkaasi, waxayna baay u direen Jubbaland & dowlada.
Dhinaca kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay mas’uuliyiinta Jubbaland iyo saraaki isha ciidamada dowladda oo ku aadan dhacda daas lagu eedeeyey Kenya.
Ciidamada Kenya ayaa marar badan lagu eedeeyey inay dhibaatooyin iyo tacadiyo ka dhan ah rayidka ay ka geysteen Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Shaqaalaha gargaarka iyo diblomaasiyiin, ayaa sheegay in weerar lagu ekeeyey xarunta gobolka Tigreega, ee magaalada Mekelle.
Warbaahin ay maamusho jabhadda xoreynta dadweynaha ee Tigray, kuwaa soo dagaal ku jira dowladda fede raalka ee Itoobiya, ayaa sheegtay in saddex qof oo rayid ah lagu dil ay, tobaneeyo kalana lagu dhaa wacay laba weerar oo halkaasi lagu qaadey.
Midowga Yurub iyo Mareykanka,ayaa ku booriyey dhinacyadda kulugta leh dagaalka in ey ilaaliyaan xabad joojinta jirta, si loogga fog aado in gobolka ay ka dhacdo masiibo bani’a adannimo oo qaro weyn.
Tani waa markii uggu horeysay ee col aadda kow iyo tobanka bilood socota, oo duq eyn xagga cirka ah laga soo sheego maga alada Mekelle.
Dowladda ayaa beenisay iney wax weerar ah qaadey. Ka maqnaanshaha warbaahinta ee gobolka Tigray, ayaa ka dhigeysa wax addag in la xaqiijiyo jiritaanka warka soo baxey.